နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်အား ထောင်ပြေးမှု ဖြင့် ချုပ်ရက် ခံစား ခွင့် မရှိ အလုပ် ကြမ်း နှင့် ထောင် ဒဏ်(၂)နှစ် ချမှတ် လိုက် – Shwe Ba
နှင်းဆီပါတီ ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြင့်အား ထောင်ပြေးမှု ဖြင့် ချုပ်ရက် ခံစား ခွင့် မရှိ အလုပ် ကြမ်း နှင့် ထောင် ဒဏ်(၂)နှစ် ချမှတ် လိုက်
Shwe Ba | November 12, 2020 | Local News | No Comments
အ သက် (၆၉) နှစ် အရွယ် ဦးကျော်မြင့် သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ် တွင် မန္တလေး အိုးဘိုထောင် ၌ ထောင်ကျ နေစဉ် ထွက်ပြေးခဲ့ ခြင်းဖြစ် ပြီး ၎င်း အား ထောင်ပြေး မှု ဖြင့် ရဲတပ် ဖွဲ့က မကြာသေး မီ စက်တင် ဘာ (၂၉) ရက် တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ ကာ မန္တလေး မြို့ ချမ်းအေးသာစံ မြို့ နယ်တရားရုံး တွင် တစ်လ ကြာအမှု စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ယ နေ့ တွင် အမိန့် ချမှတ် ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည် ။
၎င်း အား လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ချိုးဖောက် မှု ဖြင့် လည်း ရဲတပ်ဖွဲ. က အမှုဖွင့် ထားပြီး ထိုအမှု အတွက် တရားခွင့် လျှောက်လဲ ချက် လည်း ဦးကျော်မြင့် ၏ ရှေ.နေ က ယ နေ့ ပြု လုပ် ခဲ့ သည် ။
ဦးကျော်မြင့်သည် အမှု ဟောင်း မှ ကြွေးကျန်ပြစ် ဒဏ် အနည်းဆုံး ရှစ်နှစ် ကို ကျခံရ မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာ န အကျဉ်းဦးစီး ဌာန ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိ သူ ဦးရဲရင့်နိုင် က Myanmar Now ကို ပြောကြား ထား သည် ။
crd : Myanmar Now
အ သကျ (၆၉) နှဈ အရှယျ ဦးကြျောမွငျ့ သညျ ၁၉၉၉ ခုနှဈ တှငျ မန်တလေး အိုးဘိုထောငျ ၌ ထောငျကြ နစေဉျ ထှကျပွေးခဲ့ ခွငျးဖွဈ ပွီး ၎င်းငျး အား ထောငျပွေး မှု ဖွငျ့ ရဲတပျ ဖှဲ့က မကွာသေး မီ စကျတငျ ဘာ (၂၉) ရကျ တှငျ ဖမျးဆီးခဲ့ ကာ မန်တလေး မွို့ ခမျြးအေးသာစံ မွို့ နယျတရားရုံး တှငျ တဈလ ကွာအမှု စဈဆေးခဲ့ပွီး ယ နေ့ တှငျ အမိနျ့ ခမြှတျ ခဲ့ခွငျးဖွဈ သညျ ။
၎င်းငျး အား လူဝငျမှု ကွီးကွပျရေး ဆိုငျရာ ဥပဒေ ခြိုးဖောကျ မှု ဖွငျ့ လညျး ရဲတပျဖှဲ. က အမှုဖှငျ့ ထားပွီး ထိုအမှု အတှကျ တရားခှငျ့ လြှောကျလဲ ခကျြ လညျး ဦးကြျောမွငျ့ ၏ ရှေ.နေ က ယ နေ့ ပွု လုပျ ခဲ့ သညျ ။
ဦးကြျောမွငျ့သညျ အမှု ဟောငျး မှ ကွှေးကနျြပွဈ ဒဏျ အနညျးဆုံး ရှဈနှဈ ကို ကခြံရ မညျဖွဈကွောငျး ပွညျထဲရေး ဝနျကွီးဌာ န အကဉျြးဦးစီး ဌာန ပွောရေးဆိုခှငျ့ ရှိ သူ ဦးရဲရငျ့နိုငျ က Myanmar Now ကို ပွောကွား ထား သညျ ။
စင်ကာပူနိုင်ငံ ထက် ၂ ဆ ကျယ်ဝန်းမည့် ရန်ကုန်မြို့သစ် စီမံကိန်းကို ဥရောပ နိုင်ငံကြီးများ အပါအ၀င် နိုင်ငံပေါင်း (၉) နိုင်ငံအထူး စိတ်ဝင်စား
အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်သည့် ကိုယ်စားလှယ် ဦးရေထက် သေချာပေါက် ကျော်လွန် ပြီဟု ဒီချုပ်ဘက်က တွက်ချက်ထား(ကော်မရှင်ဘက်က တရားဝင်မထုတ်ပြန်သေးပါ)
” ဒီရစ်ဒါကို ပြန်စိန်ခေါ်ပြီးပြန် ထိုးသတ် ဖို့လည်း အဆင်သင့် “ပါပဲ လို့ အောင်လအန်ဆန် ပြောကြားလိုက်ပြီ